Soo dejisan DivXLand Media Subtitler 2.2 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaDivXLand Media Subtitler
Bogga rasmiga ah: DivXLand Media Subtitler
DivXLand Media Subtitler – oo ah tifaftiraha si sahlan loo isticmaalo. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto subtitles cusub oo ka socda faylasha qoraalka ama waxyaallaha faylka, baddal ama sixi subtitles la heli karo oo ku dar fiidiyo fiidiyow ah. DivXLand Media Subtitler waxay awood u lee-yahiin in ay isku-dhajiyaan khadad kasta subtitle oo leh muuqaal fiidiyow oo ku habboon oo hubi wakhtiga habka horudhaca iyada oo aan la keydin wax isbedel ah. Barnaamijka waxaa ka mid ah jimicsiyada multi-luuqada ah, isbeddelka nidaamka hoosta, bedelka tooska ah iyo hagaajinta waqtiyada, ku darista subtitles labaad, iwm. DivXLand Media Subtitler waxay taageertaa qaabab badan oo qaabab kala duwan ah waxayna la shaqeeyaan dhammaan qaababyada fiidiyoowga ee lagu taageerayo Windows Media Ciyaaryahan. Software-ka ayaa sidoo kale soo saari kara ileysyada audio-ka ah AVI iyo MPG fiidiyowyada MP2, MP3 iyo WAV.
Abuuritaanka subtitles oo ka socda faylasha qoraalka caadiga ah ama ka koobnaanta qoraalka
Horudhac fiidiyowga hoos yimaada iyada oo aan la keydin
Waxay taageertaa qaabab badan oo kala duwan
Dejinta wakhtiga iyo hagaajinta
Muuqaal jeeg ah oo luqada badan ah
Soo dejisan DivXLand Media Subtitler
Faallo ku saabsan DivXLand Media Subtitler
DivXLand Media Subtitler Xirfadaha la xiriira